င ယ် င ယ် တု န်းက ထ က် ပို ချ စ် မ ယ် - စံ သွ င် ( န မ္မ တူ ) ၊ ရာပြ ည့် #130436 | Featuring
Home › Music › င ယ် င ယ် တု န်းက ထ က် ပို ချ စ် မ ယ် - စံ သွ င် ( န မ္မ တူ ) ၊ ရာပြ ည့်
င ယ် င ယ် တု န်းက ထ က် ပို ချ စ် မ ယ် - စံ သွ င် ( န မ္မ တူ ) ၊ ရာပြ ည့်
Published at July 21, 2013
by Ko Kyaw OoDuration: 03:17
Downloading င ယ် င ယ် တု န်းက ထ က် ပို ချ စ် မ ယ် - စံ သွ င် ( န မ္မ တူ ) ၊ ရာပြ ည့် mp3 on this site is just for review purpose. If you love the song, please support the artists by buying the original CD/Cassette or buying the song from iTunes.
ေ ပြာင်းလဲ မ သွားတော့ မဲ့ အ ချ စ် နဲ့ဟောင်းနွ မ်းမ သွားတော့ မဲ့ အ ချ စ် နဲ့ မ အို မ င်းေ တာ့ မဲ့ အ ချ စ် နဲ့ င ယ် င ယ် တု န်းက ထ က် ပို ချ စ် မ ယ် တို့ ဖြ တ် သ န်းခဲ့ ကြ တ ယ် ပ န်းခ င်းတဲ့ လ မ်းမှာအ ပြုံးချ င်းဆ က် လှ မ်းခဲ့ ကြ သ လို ဆူးခ င်းတဲ့ လ မ်းကြ မ်းထ က် မှာတွဲ လ က် မ ပျ က်ကျော် လွှား ခဲ့ ကြ သ လိုရှေ့လျှောက် မဲ့ အ နိ မ့် အ မြ င့် များ အ တွ က်တွေးမမောနဲ့ လို က် ခဲ့ အ ချ စ် ရ ယ်ပြောင်းလဲ မ သွားတော့ မဲ့ အ ချ စ် နဲ့ဟောင်းနွ မ်းမ သွားတော့ မဲ့ အ ချ စ် နဲ့ မ အို မ င်းေ တာ့ မဲ့ အ ချ စ် နဲ့ င ယ် င ယ် တု န်းက ထ က် ပို ချ စ် မ ယ် အ ဆုံးအ စ မဲ့မေ တ္တာအ စွ န်းအ ထ င်းမဲ့ သ စ္စာအ တု အ ပ မဲ့ အ ယု အ ယ များ နဲ့ အ တို င်းအ ဆ မဲ့ ခွ င့် လွ တ် ခြ င်းရ ယ်ပေးအ ပ် လို့ ချ စ် ပြီးခဲ့ မှတော့ အ ချ စ်လျော့ မဲ့ အရေးမ င်းေ တွးကာစိ တ် မ ပျ က် နဲ့ လို က် ခဲ့ အ ချ စ် ရ ယ်
ေ ပြာင်းလဲ မ သွားတော့ မဲ့ အ ချ စ် နဲ့ဟောင်းနွ မ်းမ သွားတော့ မဲ့ အ ချ စ် နဲ့ မ အို မ င်းေ တာ့ မဲ့ အ ချ စ် နဲ့ င ယ် င ယ် တု န်းက ထ က် ပို ချ စ် မ ယ်
Watch video on Youtube: င ယ် င ယ် တု န်းက ထ က် ပို ချ စ် မ ယ် - စံ သွ င် ( န မ္မ တူ ) ၊ ရာပြ ည့်
Search another results: င ယ် င ယ် တု န်းက ထ က် ပို ချ စ် မ ယ် - စံ သွ င် ( န မ္မ တူ ) ၊ ရာပြ ည့်
Post related to င ယ် င ယ် တု န်းက ထ က် ပို ချ စ် မ ယ် - စံ သွ င် ( န မ္မ တူ ) ၊ ရာပြ ည့်:
[03:31] ရ င် ထဲ မိုး- နို င် မ င်း၊ မွ န်းေ အာင်By Ko Kyaw Ooရ င် ထဲ မိုး- နို င် မ င်း၊ ...
[04:06] အ မြဲ တ မ်းချ စ် သူ - ဧ ထ က် ၊ ဘို ဘို - ဆု န် သ င်းပါ ရ်By Ko Kyaw Ooအ မြဲ တ မ်းချ စ် သူ - ဧ ထ က် ၊ ...
[04:37] အ သ စ် တ စ် ဖ န် - သု ခ မိ န် လှို င် ၊ဇော် ဝ င်းထွ ဋ်By Ko Kyaw Ooအ သ စ် တ စ် ဖ န် - သု ခ မိ န် လိ ...
[04:49] အ ရိ ပ် စ စ် -ဆောင်းဦးလှို င်By Ko Kyaw Ooအ ရိ ပ် စ စ် -ဆောင်းဦးလ� ...
[03:45] သီ ချ င်းေ လးသ က်သေ - ထူးအိ မ် သ င်By Ko Kyaw Ooသီ ချ င်းေ လးသ က်သေ - ထူး� ...